Accueil > Gazetin'ny nosy > Ambatofinandrahana: Hitantana vonjy maika ny fikambanana Rémi Organès
Ambatofinandrahana: Hitantana vonjy maika ny fikambanana Rémi Organès
Tamin’ny alahady faha 28 janoary 2018 lasa teo dia nivory tao amin’ny « Cercle mess de la Police nationale » tetsy Antanimora ny zanaka ampielezan’ny fikambanana avy any Ambatofinandrahana antsoina amin’ny ararana hoe « ANA-Fitea ». Olona maro no namaly ny antso ary tonga nanafana ny fotoana koa ny fikambanan’ny mpianatra ny oniversite avy any amin’ity distrika ity mianatra eto Antananarivo antsoina hoe AI2A. Fifampiarahabana nahatratra ny taona no tena anton’ny fivoriana nefa nifarana tamin’ny fananganana birao vonjy maika hitantana ny fikambanana ny mpivory.
Nahatsapa ny rehetra tonga tao amin’ity fihaonana ity fa banga nandritra ny telo taona ny fikambanana satria tsy afaka nanova ny birao izay efa lany andro. Noho izany dia nirona tamin’ny fananganana birao vonjy maika ny terak’Ambatofinandrahana ka ingahy Jeneraly Rakotomihantarizaka Rémi Organès no lanin’ny be sy ny maro hamelona aina indray ny fikambanana ka hitarika ny fikambanana vonjy maika hanomana ny fifidianana izay tsy maintsy hatao ao anatin’ny roa volana. Nampian’ny olona efa tao amin’ny birao teo aloha izay tonga teo ingahy Rémi Organès Rakotomihantarizaka, ary ny olona iray isaka ny kaominina 9 ao anatin’ny distrikan’Ambatofinandrahana.